Reserve Apple Watch an-tserasera ary angony ao amin'ny magazay | Avy amin'ny mac aho
Ny Apple Watch dia azo tehirizina amin'ny Internet ary alaina ao am-pivarotana manomboka anio any United Kingdom
Andro iray monja taorian'ny nanombohany nitety ny tambajotram-pifandraisana izay hampiharan'i Apple ny rafitra fitehirizana sy fanangonana vaovao ao amin'ny magazay an'ny Apple Watch dia efa hitantsika sahady fa amin'ireo magazay an-tserasera amin'ireo firenena sivy misy efa natomboka ny famantaranandro dia efa miasa. Ny fivarotana tokana izay mbola tsy mavitrika dia ilay any Etazonia satria ny Apple Store ara-batana dia mbola mihidy noho ny jet lag.
Afaka miaraka amin'ity rafitra vaovao ity ianao zahao ny fisian amin'ny maodely iray an'ny Apple Watch alohan'ny handehanana any amin'ny magazay ary alao antoka fa tsy ho diso ny dia ianao ary amin'ny fotoana tsy andahanao milahatra ao amin'ilay magazay.
Ny rafitra famandrihana sy fanangonana ao amin'ny magazay vaovao napetraka androany ao amin'ny Apple Store an-tserasera dia efa miasa ao Etazonia, Kanada, Aostralia, Sina, Japon, Hong Kong, Alemana, France, ary Royaume-Uni. Manomboka izao dia azonao atao ny manamarina raha ao amin'ny Apple Store sasany dia misy singa ao amin'ilay maodely Apple Watch tadiavinao ary avy eo mandehana mahita azy. Rehefa manao ny famandrihana ianao, izay afaka ho singa tokana ho an'ny mpanjifa tsirairay, dia mila mamantatra ny tenanao amin'ny Apple ID ianao.
Hatramin'ny fotoana anaovanao ny famandrihana dia lazain'ny rafitra aminao ny fe-potoana tokony hahatongavanao ao amin'ny Apple Store, raha tsy izany dia amidy ho an'ny mpampiasa hafa ny singa Apple Watch ary mila mamandrika hafa ianao. Ataovy ao an-tsaina fa mba tsy ho lany maodely iray ianao dia mila manamarina ny fisian'ny zavatra voalohany amin'ny maraina, dia rehefa manavao ny tahiry ananany ny Apple Store. Rehefa mandeha ny fotoana dia misy famandrihana Mahatonga ny isan'ny Apple Watch hihena izy ireo mandra-piandry ny ampitso.
Raha miditra amin'izao fotoana izao isika any amin'ireo fivarotana Apple amin'ny Internet any amin'ireo firenena sivy ireo dia ho hitanao fa tsy misy tahiry intsony amin'ireo maodely hatrizay, mazava ho azy, efa namidy antoandro ary hatramin'ny ampitso izay havaozina ny stock tsy misy azo atao. Tsy fantatra mazava raha hampiharina amin'ny andro zero ity rafitra ity any amin'ireo firenena manaraka, ao anatin'izany i Espana. Raha izany no izy, Filaharana manoloana ny Apple Store amin'ny 26 Jona ary ireo mpampiasa nanao famandrihana no tena mila mandeha any amin'ny Apple Store ara-batana.
Tokony hazavaina fa rehefa manao famandrihana ianao dia tsy mila mandoa vola. Ny sisa ataonao dia ny hamonjy azy amin'ny anaran'ny Apple ID anao ary raha toa ka tsy hitady azy ianao na inona antony, mandeha ho azy Nofoanana ny famandrihana taorian'ny fe-potoana farany, araka ny efa nohazavainay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny Apple Watch dia azo tehirizina amin'ny Internet ary alaina ao am-pivarotana manomboka anio any United Kingdom
Monster dia tsy ho afaka hamidy Vokatra vita amin'ny iDevices (MFi) noho ny olana amin'ny Beats
Ny fahalemena lehibe dia mbola miasa amin'ny OS X sy iOS